मृतात्माहरू घर फर्कने पर्व मनाउँदै जापानीहरू · Global Voices नेपालीमा
मृतात्माहरू घर फर्कने पर्व मनाउँदै जापानीहरू
अनुवाद पोष्ट गरिएको 23 अगस्ट 2016 14:59 GMT
यो लेख पढ्नुहोस् Malagasy, русский, Ελληνικά, বাংলা, Deutsch, Français, Español, Italiano, English
मिनातो मिराइ बोन नृत्य (みなとみらい大盆踊り) । फ्लीकर प्रयोगकर्ता मुरातामा । License: CC BY-SA 2.0.
हरेक वर्ष मध्य-अगस्टमा जापानले पितृ पर्व, ओबोन उत्सव मनाउँछ, जब पितृ पैतृक घरमा जीवितहरुसँग समय बिताउन धेरै दिनको लागि फर्कन्छन्। ओबोन सामान्यतया जापानभर अगस्ट १५ मा मनाइन्छ। सन् २०१६ मा अगस्ट १५ तारिख सोमबार परेको थियो र नयाँ बिदा माउन्टेन डे,सँग मिलाएर अगस्ट ११ तारिख बिहीबारदेखि देशभरिका मानिसहरुले ५ दिनको सप्ताहन्त बिदा पाउन सफल भएका थिए। धेरै परिवार ओबोन उत्सव मनाउन गाउँ फर्के।
बोन नृत्य ( 盆踊り,बोन ओदोरी ) पनि जापान भर आयोजित गरिन्छ। यस्ता नृत्य सामान्यतया भेला हुने ठाउँहरूको आसपास, जस्तै शिन्तो धार्मिक स्थल, बौद्ध मन्दिर, सार्वजनिक प्लाजा, र सुपरमार्केटको पार्किंगमा समेत आयोजित गरिन्छ।
धेरै मानिसहरू आफ्ना स्थानीय नृत्यको उत्सव मनाइरहेका फोटो र भिडियो इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्छन्।
︎✂︎✂︎✂︎ In the precinct of Shinanokokubun-ji Temple
#summer#nightview#festival#temple#instagood#instadiary#instagramjapan #夏 #夜景 #祭り #盆踊り #寺 #信濃国分寺 location: Ueda, Nagano Pref. G'morning‼︎ 出しそびれたpicを出しちゃいマス 朝っぱらから夜景とか…
शिनानो कोकुबुनजी मन्दिर हाता, उनेदा नागानो #summer #nighttime #festival #Bon dance #temple #temple #ShinanoKokubunji
सामान्यतया बोन नृत्य सजावटमा लालटेनको श्रृंखला, रातो र सेतो ध्वजा पताका, साथै एक टावर वा संगीतकार र एक ताइको ड्रमरको लागि मंच समावेश हुन्छ।
शिबाता हारुना ( @867_48t ) ले पोस्ट गरेको एक फोटो। अगस्ट १७, २०१६, ७:५२am
परम्परागत लोकगीतहरू प्रत्यक्ष प्रस्तुत गरिन्छन् वा लाउडस्पीकरबाट बजाइन्छन्।
बोन नृत्यको लागि समुदायका सबैजना आउँछन्, विशेषगरी साना बच्चाहरु भएका परिवार।
वार्षिक बोन नृत्यले मेलाको वातावरणसहित एक सामुदायिक उत्सवको रुपमा पनि कार्य गर्दछ। त्यहाँ खेल खेल्न र विभिन्न प्रकारका गर्मीमा खाने खाद्यपदार्थ जस्तै काकिगोरी बरफ खान पाईन्छ।
हामी समुदायबाट साथीहरुसँग बोन नृत्यमा गयौं, र त्यहाँ पूर्वप्राथमिकका बच्चाहरु धेरै थिए। तिनीहरु सबै उत्साहित हुँदै नाचे। घर आउँदा मलाई अन्य आमाहरुसँग कुरा गर्ने मौका मिल्यो।
#kidstagram #sisters #insta_toddler #thechildrenoftheworld #pixel_kids #kidsfashionforall #cutekidsclub #4yearsold #1yearold #kids_japan #tv_kidz #kids_of_our_world #beautiful_kids_of_the_world #littleandbrave #minibymini #ministyleblog #instamamme #mamxmam
जापानमा कुनै बोन नृत्य ज्यादै व्यापक छन्, हजारौं दर्शकलाई आकर्षित गराउँछन्। तोकुशिमा प्रान्तस्थित अवा ओदोरी पर्व सम्भवत: जापानको सबभन्दा प्रख्यात बोन नृत्य हो जसले हरेक वर्ष कम्तिमा १० लाख मानिसहरुलाई यस शहरमा आकर्षित गर्दछ।
क्याप्सन: तोकुशिमामा अवा ओदोरीको पहिलो दिन। ( अगस्ट १२, २०१६ )
जापानभर व्यापक रुपले नृत्य गरिन्छन्। क्युशु द्वीपस्थित कुमामोतोको समर नृत्य यामागा लालटिन पर्व तपाईंले तल हेर्न सक्नुहुनेछ:
रातीको समयमा बत्ती सधैं सुन्दर देखिन्छन्:
हाम्रो शहरमा बोन नृत्य।
बोन नृत्यका थप फोटो इन्स्टाग्राममा ह्याशट्याग #盆踊り प्रयोग गरी हेर्न सकिन्छ।